प्रिय यात्री, म उडानका क्रममा मनोरंजनका लागि तपाईको हुँ, तपाईंहरु मबाट के गराउन चाहनुहुन्छ ? – Khabaarpati
January 4, 2021 January 4, 2021 goodmamLeaveaComment on प्रिय यात्री, म उडानका क्रममा मनोरंजनका लागि तपाईको हुँ, तपाईंहरु मबाट के गराउन चाहनुहुन्छ ?
ब्रिटिस एयरवेजकी एक एयर होस्टेस उडान मै रहँदा यात्रुहरुलाई यौ नका प्रस्ताव दिइरहेको खुलासा भएपछि त्यसको जाँच सुरु गरिएको छ । यति मात्रै होइन उनले आफ्ना ग्राहकहरुलाई माइल हाई क्लबमा सहभागी हुन पनि भनिरहेकी थिइन् । फ्लाइट अटेन्डेन्टले आफनो युनिफर्ममा अनबोर्ड रहँदै आफ्नो फेसबुकमा अ श्लि ल तस्विर पोस्ट गरेकी छन् । यस घटनाले तहल्का म च्चाएपछि ब्रिटिस एयरवेजले सफाइ दिँदै उक्त घटनाको छानबिन सुरु भइसकेको जानकारी दिएको छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
फ्लाइटमा यात्रीहरुबाट बच्दै लिइएको अ श्लि ल त स्विर पोस्ट गरि ती एयर होस्टेसले लेखेकी छन्, प्रिय यात्री, म उडानका क्रममा मनोरंजनका लागि तपाईको हुँ । तपाईंहरु मबाट के गराउन चाहनुहुन्छ । यो पोस्ट भाइरल भएपछि ब्रिटिस एयरवेजको ब्यापक चर्चा भइरहेको डेली मेलले जनाएको छ । द सन्लाई दिएको अन्तर्वार्तामा एक अज्ञात फ्लाइट अटेन्डेन्टले आफु ब्रिटिस एयरवेजका लागि काम गर्ने दावी गरेकी छन् । आफना अन्डरवियर २५ युरोमा बेचेर अतिरिक्त आम्दानी गरिरहेको उनले बताएकी छन् ।यो बाहेक उनले वन टु वन सेवाका लािग पनि अतिरिक्त शुल्क लिने गरेकी छन् । यदि ग्राहक भुक्तानीका लागि सक्षम हो भने उनी उडानकै क्रममा व यस्क मनोरन्जन पनि दिन सक्ने उनले आफ्नो ब्लगमा बताएकी छन् । ग्राहकले भेट्न कै लागि ५० युरो सुरक्षा शुल्क दिनु पर्ने उनले बताएकी छन् । यो शुल्क पनि माग अुनसार हेरफेर भइरहन्छ ।
यसमा मोलमोलाइको कुनै गुन्जाइस छैन । उनी अन्य देशका ब्यक्तीहरुसँग भेट्ने गर्छिन् । त्यसबेला उनको फिस धेरै हुने गर्छ । ब्यापक भाइरल भएको यस घटनामा ब्रिटिस एयरवेजको नाम आएपछि कम्पनीका प्रवक्ताले भने, हामी हरेक समय आफ्ना सबै सहयोगीहरुसँग उच्चतम स्तरको ब्यवहारको अपेक्षा गछौं । हामी यी मामिलाको गहिराइमा छानबिन गरिरहेका छौं ।फाइल तस्विर
जब अभिषेकले हनिमूनमा ‘क-न्डम’ ल्याउन बिर्सिए…